Sababta uu ninku uga fogaado naagta uu jecel yahay | Niman qurux badan
Muxuu ninku uga ilaaliyaa naag uu jecel yahay
Alicia tomero | | Lamaanaha iyo Galmada
Bartamaha bilowga xiriirka nin ayaa laga yaabaa iska ilaali naag uu jecel yahay. Waa hab-dhaqan soo noqnoqda, inkasta oo aanay u muuqan. Raggu sidaan ayey u dhaqmaan, in muddo ah waxay dareemayaan xamaasad oo ay siiyaan wax walba oo ay si lama filaan ah si tartiib tartiib ah kaa fogaadaan.
Raggu waxay leeyihiin hab kale oo jacayl ku dhaca, haddii ay sidoo kale dareemaan in lagu qasbay ama ammaan ah inay sii wadaan ballanqaadkaas waxaa laga yaabaa inay mar mar ka fogaadaan. Talada ugu fiicani waa in la sugo in wax walba ay si caadi ah u socdaan, in aysan jirin xiriir adag oo la sugo sixirka si uu u soo baxo. Si ka duwan sidii dib-u-eegis lagu sameeyay, waxa jira dumar aan yeelan karin dulqaad badan oo u baahan jawaabo hab-dhaqan noocan oo kale ah.
1 Muxuu ninku uga fogaadaa haweeneyda uu jecel yahay?
1.1 Amni darrada
1.2 Ninkaas ayaa durba helay wixii uu rabay
1.3 Ayaa ka daalay xidhiidhkaas
1.4 La'aanta xirfadaha bulshada ama garaadka shucuureed
1.5 Waxqabad la'aan
Muxuu ninku uga fogaadaa haweeneyda uu jecel yahay?
Dumar badan ayaa is waydiiya in aanay garan karin in ay wax ogaan karaan maxaa nin rajo lehSi lama filaan ah ayaan kuu indho-tiray ama gidaarada u taagay si ay wax waliba ugu sii socdaan qaab kale oo ka duwan. Xaqiiqdan waxay abuurtaa hubaal la'aan weyn waana arrin ay cilmi-nafsigooda galiyaan ama ay sabab u raadiyaan.
Arrimaha la soo qaaday waxay noqon karaan kuwo muhiim ah. Ma jirtaa hab gaar ah oo iga dhigaya inaan ku indho-tiro? Miyuu dhahaa waan ku jeclahay wax badan ka dibna kuma tuso? Habdhaqanka ninku way khilaafsan yihiin aragtiyaha qaarkood iyo su'aal dhab ah oo ku jirta qofnimadaada weydii oo ka soo horjeeda mala-awaalka.
Runtii waxaa jira niman xasaasi ah oo xishood badan kuwaas oo aan aqoon sida loo wajaho xiriirka. Marka ay timaaddo in wax walba loo oggolaado inay si wadajir ah u socdaan, waxay kaliya arkaan inay jiraan caqabado ay sabab u tahay ammaan-darrada joogtada ah. Inkasta oo ay u muuqdaan rag gebi ahaanba isku kalsoon waxay muujin doontaa ammaan darro marka la isku dayo in uu wax noolaado.
Maxaa dhacaya? Waxaa hubaal ah inay taasi dareemayaan naagtaasi waa wax ka baxsan awooddeeda oo ma yaqaaniin si ay wax u cabbiraan. Waxaa jira rag u halgama sidii ay u muuqan lahaayeen wax aanay ahayn oo dadaalkaasi ka dhigaya inay dib u noqdaan aakhirka. Gunta su'aashan waa la samayn karaa dareemo cabsi diidmo, Waxay lahaayeen xidhiidho adag ama waxay la kulmeen burbur naxdin leh waxayna ka dhigtaa inay dareemaan kalsooni darro.
Ninkaas ayaa durba helay wixii uu rabay
Xaalado kale, qof waa la arki karaa hore ayuu u gaadhay wixii uu rabay. Marka ay dareemaan in haweeneydaas mar hore ayay qabsadeen oo leh nooc kasta oo sasabasho ah, ka dibna daallan oo is deji. Xaaladahan, waxaa fiican inaad noqoto qof dumar ah oo leh madax-bannaanideeda, oo aan u baahnayn inay la joogto qof si ay u dareemaan inay ku qanacsan yihiin oo aan u oggolaan inay u koraan qof ahaan. Laakiin waa inaad dareentaa, ma jiraan si aad u abuurto xeeladdan oo aad ku murugooto gudaha.
Ayaa ka daalay xidhiidhkaas
Inkastoo ay u egtahay mid xun, waxaa sidoo kale jira rag ka daalin xiriirka. Hubaal wuxuu ku jiraa daqiiqad go'aan la'aan, wuu ku jecel yahay, laakiin gunta hoose ma tihid naagtii noloshiisa. Waqtigaan ninka noocaan ah wuxuu xiriir ku meel gaar ah la leeyahay ama la qabsado dumarka kale si uu u abuuro isbarbardhig. Wax yar ayaanu ogaan doonaa sida uu ninkaasi u guuro sababtoo ah waxa lagu maaweeliyaa noocyada kale ee dareenka.
La'aanta xirfadaha bulshada ama garaadka shucuureed
Dad badan kuma tiirsanaan karaan xakamee dareenkaaga. Maalmaha qaar waxay dareemayaan inay kor u kacday, maalin kalena way burburtay, markaa qof kale ayaa ogaan doona isbeddellada noocaas ah. Rag aan dhaafin baa jira wakhtigaaga bulsho iyo shaqo ee ugu wanaagsan Taasina waxay ku adkeynaysaa inay awood u yeeshaan inay dhistaan ​​xiriir lamaanayaal leh guud ahaan caadi. Waxaa soo food saartay khilaafkaas shucuureed waxay ka cararaan xaalado iyaga ku kacaya Qaado wadarta guud, maadaama aysan haysan qalab ku filan oo ay ku wajahaan xaaladaha walaaca leh.
Ragga qaar baa ka cagajiid inay tallaabadaas hore u qaadaan sababta oo ah wax ay ku qariyaan shakhsiyadooda dhexdeeda. Dadkani waxa ay samaysteen nooc ka mid ah xidhiidh qoys oo ay markaas dadka kale dibadda uga dhigayaan.
Waa niman ay waligood soo korin jireen reer ay hogaamiso naagXaaladdan oo kale hooyadu had iyo jeer waxay samaysay dhammaan go'aamada. Tani waxay ka muuqan doontaa xiriirkaaga jaceyl, tan iyo mar walba waxay raadin doonaan naag dabeecad leh oo yaa yaqaan sida loo majaro habaabiyo meesha ay tahay inay ku socdaan. Marka naagtu aragto in ninku uu luminayo xiisaha, dhab ahaantii waa sababtoo ah hadda waa kan ka codsada haweeneyda inay toosiso xiriirkaas.
Si kastaba ha ahaatee, haweeney aan garanayn waxay ku sameyso xaaladahan. waa in falanqee oo sug. Waqtiga ayaa kaa caawin doona inaad ka jawaabto dhammaan su'aalaha noocaan ah, maadaama haweeneyda leh dib u dhacyadan ay sidoo kale la yaaban tahay in ninkaasi uu u qalmi doono iyo in kale. Sida caadiga ah ninku waa ka lumiyaa xiisaha ama ka fogaado haweeneyda marka waa arrimo gudaha ah ama dareen gudaha ah si sax ah uma xallin karaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Muxuu ninku uga ilaaliyaa naag uu jecel yahay
Dabinnada lagu ogaanayo haddii lammaanahaagu uu kugula kacayo daacadnimo
Waa maxay wakhtiga ugu fiican ee jimicsiga